विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भोलिबाट उद्धार गरिने, भोलि यूएई र म्यानमारबाट ल्याइने – Avenues Khabar
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १५:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं : सरकारले लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई भोलिबाट उद्धार गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा भोलि यूएई र म्यानमारमा रहेका नेपाली फर्काइने भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यूएईबाट १ सय ७९ जना र म्यानमारबाट ३५ जना गरी भोलि २ सय १४ जनालाई भोलि काठमाडौं ल्याइँदैछ ।
म्यानमारले आफ्ना नागरिक लिन आउने विमानमै नेपालका ३५ जनालाई ल्याइदिने भएको हो । यूएईले भोलिदेखि आठ वटा चार्टर फ्लाइटमा नेपालीलाई फर्काउन लागेको हो । यूएईबाट ४ हजार नेपाली फर्कने तयारीमा छन् ।
कुवेतममा रहेका करिब तीन हजार श्रमिकलाई पनि त्यहीको सरकारले नेपाल पठाइदिने भएको छ । आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले फिर्ता गर्ने भएको हो । कुवेतबाट करिव ५ हजार नेपाली घर फर्कने प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
पहिलो चरणमा सरकारले समस्यामा रहेका करिव ४० हजार नाागरिकलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ । कुवेत र साउदी अरेबियाबाट आठ–आठ हजार फर्कने तयारीमा छन् । कतारबाट ११, मलेसियाबाट ७ हजार र साइप्रसका चार सय पनि फर्कने सूचीमा छन् ।
विमानस्थलमा ओर्लेपछि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा ९ वटा पार्टी प्यालेसमा उनीहरुलाई राख्ने तयारी छ । त्यसपछि स्थानय तह र प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पठाइने छ ।
काठमाडौ । काभ्रेको बनेपामा कुकुरको हत्या…
३२ श्रावण २०७८, सोमबार ११:४१
हुम्ला- हुम्लाको दक्षिण भेगका चारवटा गाउँपालिकाका…
अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोप अभियान नरोक्न डब्लुएचओको अपिल
३ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:५४
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १५:२०
काठमाडौ । भारतबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको…
८ असार २०७८, मंगलवार १६:०८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते नेकपा एमालेको…
६० जनामा कोरोना संक्रमित थपिए, थप दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौ । नेपालमा शनिबार थप ६० जनामा कोरोना…
एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौ । प्रतिनिध सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई बैठकमा प्रवेश…
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त, प्रभुराम शर्मालाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार…
चितवन- चितवनको इच्छाकामनामा पहिरो खस्दा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–४…
पार्टीभित्रको विचार, सिद्धान्त जोगाउन उम्मेदवारी दिएको हुँ: भूसाल
चितवन । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूसालले पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त र माक्र्सवाद ज्यूँदो छ भन्ने…